Ecology - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Madaxa Digest Sayniska Ecology
Beeraha dabiiciga ah. Rajada laga qabo xaaladaha cusub
Lyudmila Dulskaya Intii lagu jiray cudurka faafa, dadku waxay bilaabeen inay wax badan ka fikiraan tayada cuntada, iyo xiisaha alaabooyinka dabiiciga ah ayaa kordhay. Laakiin hadda iibsadaha ayaa...
Wax cusub oo daboolaya ayaa la sameeyay si looga ilaaliyo aphids, thrips iyo diirka
Cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Gobolka North Carolina ayaa soo saaray Plant Armor, oo ah dhar-dharka ah “hubka dhirta” kaas oo ka dhigaya cayayaanka in ay dhex maraan maan-gaab haddii...
Ku beerista ubaxa duurjoogta ah ee beeraha baradhada waxay gacan ka geysan kartaa xakameynta aphids ee sida fayrasyada
Ku beerista ubaxa duurjoogta ah ee beeraha baradhada waxay yareyn kartaa fayrasyada aphid-borne waxayna yareyn kartaa isticmaalka cayayaanka, ayuu qoray wargayska Baradhada Eric Anderson,...
Ilaha caabuqa Rhizoctonia iyo hababka gudbintiisa. Wareega dalagga sida habka halganka
Waxaan sii wadeynaa wadahadalka ku saabsan dhibaatada hadda jirta - rhizoctoniosis baradho. Isha caabuqu waa dhirta baradhada buka iyo qaar ...
Ilaha baaruudka ee baradhada
Inkasta oo doorka muhiimka ah ee sulfur ee wax soo saarka dalagga, element this had iyo jeer ma helin fiiro gaar ah. Qaar badan...
nematode waxaa lagu jabin karaa warqad laga sameeyay muuska
nematode cyst baradho waa cayayaan khatar ah. Gooryaankan yar-yar ayaa ku nool carrada, kuwaas oo gala xididdada geedaha baradhada ee da'da yar yareeya...
Baradhada baradhada ee Colorado ayaa iska caabin u samaysay in ka badan 50 nooc oo cayayaan-dileyaal ah. Tani waxay ka dhigeysaa cayayaanka "cayayaan heer sare ah" oo waxyeelleeya baradhada ...
Bog 1 laga bilaabo 8 1 2 ... 8 Xiga